१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४९ – Page2– mero sathi tv
१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४९
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४९ 0
मानिसहरु सुनलाई विभिन्न गहना बनाएर लगाउने गर्छन् । सुन मात्र होइन चादिँ, तामा तथा अन्य विधिन्न धातुको प्रयोग गरि गहना लगाउने गरिन्छ । मानिसहरु सुन लगाउन निकै सौखिन हुन्छन् । पुरुष भन्दा यसको प्रयोग बढि महिलाले गरिरहेका हुन्छन् । ” हरेक…
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४५ 0
पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिम स्त्रीलाई मन पारेर विहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले मन पारेकी स्लिम केटीको सरिर विहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । अर्थात् विहेपछि कुनैपनि…
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४३ 0
जान्नुहोस् कुन राशिका पुरुषको पत्नी खुसी रहन्छन् : १) कन्या राशिका व्यक्ति ह्याण्डसम देखिन्छन् । जो सुकै केटी यस्ता केटालाई पतिकोरुपमा पाउन चाहान्छन् । यो राशिका व्यक्ति आफ्नी पत्नीलाई धेरै माया गर्छन् । २) सिंह राशिका व्यक्तिसँग…
आँखा किन फर्फराउँछ ?
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:४१ 0
पुरुषको दाहिने र महिलाको देव्रे आँखा फर्फराउनुलाई शुभ मान्ने विश्वास रहँदै आएको छ । तर, ठीक विपरीत भयो भने अशुभ मानिन्छ । तर, विज्ञानले आँखा फर्फराउनुलाई स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । आँखारोग विशेषज्ञ डा.इनुप्रसाद ढुगेंल…
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:३७ 0
दैबले किन यति धेरै चोट दियो जलजलालाई ?अस्पतालमा सबैको रुवाबासी !
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:३२ 0
लामो समय देखि अस्पतालमा उपचार गरिरहेकी जलजला परियारको उपचार अझै उस्तै छ।डाक्टरले अझै १२ हप्ता सम्म मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु हुदैन भने पछि झन् परिवारमा पिडा थपिएको छ। हेरौ उक्त समय लिएको भिडियो कुराकानी परिवारमा यति सम्म रुवाबासी : [youtube…
मलेशियामा नेपाली द्वारा नेपालिनै लुटिए अचेत हुनेगरी पिटिए पछी जङ्गलमा फ्यालिए।
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:३० 0
रुकुम जिल्ला जेदवाङ गाबिस वडा नम्बर १ लाल्टिबाङ का केशव चापागाई मलेसिया को कोलालम्पुर कोत्राया स्थित साथिभाइ रेस्टुरेन्ट चलाउदै आएका छन । चापागाईं कहिलेकाही फूर्सद को समयमा म्युजिक भिडियो हरु छायांकन गर्दै आएका थिए । गत सनिवार अबैधानिक…
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:२६ 0
भनिन्छ, सपनाले भावी दिनको संकेत गर्छ । धर्मशास्त्रहरुमा विश्वास गर्ने हो भने, कतिपय सपना त्यस्तो समयमा देखिन्छ, जुनबेला हाम्रो आत्मा र मस्तिष्क भगवानको समिपमा पुगेको हुन्छ । यस्तो बेला देखिने सपनाहरु जस्ताकोतस्तै मिल्छन् । वैज्ञानिकहरु पनि…
कहिल्यै धनी बन्न दिंदैनन् यी ६ बानीले
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:२३ 0
अर्बपति तथा विश्वका सफल मानिसहरुले आफ्नो सफलता पछाडिको कारणको रुपमा आफ्नो राम्रो आनीबानी पनि भन्ने गरेका छन् । सफलताको एउटा प्रमुख कारण आनीबानी पनि हो । सफल मानिसहरु राम्रो आनीबानीलाई सधैं फलो गर्छन् र त्यसैको नियममा बाँधिइरहेका हुन्छन् ।…
आयुर्वेदअनुसार खजुरको नियमित सेवन गर्नाले यस्ता फाईदाहरु हुन्छ ।
mero sathi tv	 १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ११:०४ 0
आयुर्वेदअनुसार खजुर शीतल, मधुर रस भएको, स्निग्ध, रुचिकारक हुन्छ । यो मुटुका लागि राम्रो हुन्छ, तृप्ति दिने खालको हुन्छ । आयुर्वेदले खजुरलाई वीर्यवर्धक, पौरुष जगाउने, बलदायक मानेको छ । यसको नियमित सेवनले क्षय, रक्तपित्त, वायु, वान्ता,…